လားရှိုးမြို့မှာ ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် အတွင်းရေးမှုးအပါအဝင် ဆယ်ဦးကျော်အဖမ်းခံရ
RFA burmese -2month ago
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့မှာ ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းက ကချင်နှစ်ခြင်း အသင်းတော် ယုံဟော်အားကစားကွင်းအနီး ဆန္ဒပြနေတဲ့ လူငယ်တွေက လူစုခွဲကာနီးမှာ အရပ်ဝတ် ဝတ်ထားတဲ့ မသင်္ကာစရာလူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြရာကနေ ကချင်နှစ်ခြင်း အသင်းတော် အတွင်းရေးမှူးအပါအဝင် ၁၀ ဦးကျော် ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။
ျမန္မာႏိုင္ငံက သူတို႔လုပ္ငန္းကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ကန္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရကို Chevron စည္းရံုး
အာဆီယံအစည်းအဝေး ထိုင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်မှာ မဟုတ်
- RFA burmese
ျမန္မာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသူ ၃ သန္းခြဲထိရွိလာႏုိင္
ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ NUG ဒုဝန္ႀကီး ေနာ္ထူးေဖာ
တ႐ုတ္အစုိးရပိုင္ကားကုမၸဏီ ျမန္မာစက္႐ံု ဒီႏွစ္ထဲဖြင့္မယ္
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တစ်သန်းကျော်ကျန်နေသေးလို့ ဆေးလာထိုးကြဖို့ ကြေညာ
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လုံးဝရပ်သလောက်ဖြစ်နေ
အာဆီယံအနေနဲ့ NUG ကိုသာ အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဝန်ကြီးတစ်ဦးတိုက်တွန်း
စွဲဆိုထားတဲ့ အမှု ၆ မှုထဲက တစ်မှုအတွက် ရုံးချိန်း
- BBC burmese
ဦးမြအေး၊ မင်းသားလူမင်း၊ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ အင်းစိန်ထောင်မှာရှိနေ
ဗြိတိန်တလွှားက လွှတ်တော်အမတ် ၁၀၀ က မြန်မာစစ်ကောင်စီကို ပိုပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့ အဆိုတင်
CNF ဌာနချုပ်ရှိရာ ထန်တလန်မြို့နယ်က ရွာ ငါးရွာကို စစ်တပ်က သွားလာခွင့်ကန့်သတ်
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်နေလို့ တောင်သူတွေ အခက်ကြုံ
ယင်းမာပင်နဲ့ ကနီမြို့ကြား ကျေးရွာတွေ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရ
လမ်းပေါ်အထွက်နည်းပေမယ့် သပိတ်ပွဲတွေ မပျက်သေး
တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လံုးဝရပ္သေလာက္ျဖစ္ေန
ရာဇဝတ်ကောင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ သမီးတော် နှင့် Mytel အကြား လျှို့ဝှက်အပေးအယူများ
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ဝန်းထဲ ဗုံးပေါက်
ဗိုလ်မှူးညွန့်နိုင် CDM လုပ်ပြီး ကေအန်ယူထံ ခိုလှုံ
မူဆယ် နာရီစင်နား ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး မတက်
ခေါင်လန်ဖူးလူငယ် ၆ ဦးအား ဌာနေပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့က မတရားဖမ်းဆီး
မြန်မာပြည်သူများ အကြမ်းဖက်ခံနေရသည့်ကိစ္စ တားဆီးပေးရန် အောင်လအန်ဆန်း တောင်းဆို
သေနတ်ပစ်ခံရသည့် သတင်းထောက် ၂ ဦးကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် SMJN တောင်းဆို
အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီးပေးရန် အင်တာပိုထံ NUG အစိုးရ အကြောင်းကြား
မန္တလေးမြို့က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူလှုပ်ရှားမှု
မင်းသားဇဏ်ခီနှင့် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ကို ဆက်လက်စိစစ်ရန် နေအိမ်တွင်ထားရှိဟု စစ်ကောင်စီ သတင်းထုတ်
စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ ခြောက်ဦးထက်မနည်း ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
စစ်တပ်စီးပွားရေးအတွက် မင်းအောင်လှိုင်၏ သမီးထံသို့ ချေးငွေပေးမှုတစ်ရပ်အပေါ် အရေးပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ရိုးမဘဏ်လီမိတက်ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ကြသည့် IFC၊ GIC နှင့် Norfund တို့အား Justice For Myanmar မှတောင်းဆိုလိုက်သည်
တူမီးသေနတ်တွေ အပ်ရင် စစ်ကောင်စီတပ် ရွာကနေ ထွက်သွားမယ်ပြော
ယင္းမာပင္နဲ႔ ကနီၿမိဳ႕ၾကား ေက်းရြာေတြ ရြာလံုးကၽြတ္ ထြက္ေျပးေနရ
စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းဆီးပေးဖို့ အင်တာပိုကို NUG အစိုးရ အကြောင်းကြား
ႏိုင္ငံတဝန္း ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ ၿဖိဳခြဲမႈ ေနာက္ဆံုးသတင္းေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္ခ်က္၊ က်န္းမာေရးက႑နဲ႔ တိုင္းရင္းသတင္းလႊာ အပတ္စဥ္က႑ေတြအပါအဝင္ ၾကာသသပေတးည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နာရီ ေရဒီယိုအစီအစဥ္
အာဆီယံအေနနဲ႔ NUG ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးတုိက္တြန္း
သတင္းမီဒီယာတခ်ဳိ႕ စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းဖို႔ ဖိအားေပးခံရ
စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကို ဖမ်းဆီးပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ (INTERPOL) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံသို့ NUG ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့
အာဆီယံအစည်းအဝေး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် လူကိုယ်တိုင်တက်မယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေပါဝါကို တရားရုံးလက်ခံ၊ အင်တာနက်မရှိလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရုံးမထုတ်ဖြစ်
ကလေးမြို့မှာ CDM ပါဝင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း တစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ ဘယ်သူတွေ တက်မလဲ
မြန်မာ့အရေး အင်ဒိုနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး ဆွေးနွေး
စစ်ကောင်စီရဲ့ ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်နှစ်ခုကို အမေရိကန် ပိတ်ဆို့အရေးယူ
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာသိမ်းမှု နေ့စွဲမှတ်တမ်း
ဂျပန်သတင်းထောက် လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဂျပန်သံရုံးပြော
မြန်မာအာဏာသိမ်းမှု ရှုတ်ချတဲ့ ဗြိတိန်ဥပဒေမူကြမ်း ဗြိတိန်အမတ်တွေထောက်ခံ
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံအစည်းအဝေး ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ တက်မှာမဟုတ်
နေပြည်တော်က NLD အမတ် နှစ်ဦးအမှု လိုပြသက်သေကို စတင်စစ်ဆေး
လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈကန္႔ကြက္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲ ေရွ႕အလားအလာ
ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ျဖန္႔ေဝမႈ Greta Thunberg ပန္ၾကားခ်က္
မှော်ဘီနည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ဦးအပါအဝင် ၃ဦးကို ထောင် ၃နှစ်စီ အမိန့်ချ
တောင်သမာန်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့
ခေါင်လန်ဖူးကလူငယ် ၆ ဦးကို ခေါင်လန်ဖူး ပြည့်သူ့စစ်​တွေက ဖမ်းဆီး
ချင်းမိုင်ခရိုင် ဝိန်းဟိန်မြို့ အနီးရှိ RCSS/SSA တပ်စခန်းဆီကို စစ်ကောင်စီတပ်မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ထပ်ပစ်
အာဆီယံအစည္းအေဝး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ လူကိုယ္တိုင္တက္မယ္
စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦး CDM ပြုလုပ်ပြီး KNU တပ်မဟာ ၁ တွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံ
ဖားအံတွင် CDM ဝင်သည့် ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
ေန႔စဥ္ တီဗီြသတင္းလႊာ (၀၄-၂၂-၂၀၂၁)
ကမာၻတဝန္းမွာ ေျမကမာၻေန႔ အထိမ္းအမွတ္ျပဳလႈပ္ရွား
လမ္းေပၚအထြက္နည္းေပမယ့္ သပိတ္ပြဲေတြ မပ်က္ေသး
ျမန္မာအာဏာသိမ္္းမႈ ႐ႈတ္ခ်တဲ့ ၿဗိတိန္ဥပေဒမူၾကမ္း ၿဗိတိန္အမတ္ေတြေထာက္ခံ
ထုိင္းႏုိင္ငံထဲ ခိုးဝင္သူေတြမ်ားလာလို႔ ထုိင္းဘက္ျခမ္းမွာ လံုျခံဳေရးတင္းၾကပ္
ျမန္မာပဋိပကၡ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ထိုင္းနဲ႔အင္ဒိုလက္ခံ
ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံအစည္းအေဝး ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ တက္မွာမဟုတ္
တရုတ်နယ်စပ် ကိုဗစ်ရောဂါပိုများလာလို့ မြန်မာလုပ်သားတွေ နေရပ်ပြန်
CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒုရဲအုပ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဆေးကုသခွင့်မရဖြစ်နေ
ပုသိမ်ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမင်းထွဋ်ကို ရုံးထုတ်
မြစ်ကြီးနား ဘွမ်ရာယာန်စစ်‌ဘေးရှောင်စခန်း စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးများ လိုအပ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့သစ်ကြေညာ
မုံရွာဂေဇက် အွန်လိုင်းတင်ဆက်မှု ရပ်နားကြောင်း ကြေညာ
ဗန်းမော်မြို့ရှိ စိန်သစ္စာနှင့် စွမ်းမေတ္တာဆေးရုံ ၂ ရုံကို လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွင်ပါမည်ဟု ပထမဆုံး CDM ဗိုလ်ကြီးပြော
ကံပေါက်တွင် စစ်အာဏာရှင်ကို ၇၄ ရက်မြောက် ဆန္ဒပြ
မန္တ‌လေးမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို တားဆီးစစ်ဆေးနေ
အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္ကြပ္မႈၾကားက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆက္ႏႊဲမည္ (ေတဇာဆန္း)
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရး ဦး၀င္းတင္အထိမ္းအမွတ္ ရွပ္ျပာ၀တ္ ဆႏၵျပ
George Floyd ေသဆံုးခဲ႔ရတဲ႔ Minneapolis ၿမိဳ႕ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ပံုေတြကို တရားေရးဌာနက စူးစမ္းစစ္ေဆးမည္
မံုရြာေဂဇက္တိုက္ ၀င္စီးခံရမႈ ႏွင္႔ စစ္ေကာင္စီရဲ႕သတင္း အေမွာင္ခ် လုပ္ရပ္
အာဆီယံအစည္းအေဝးအေပၚ သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ေမၽွာ္လင့္ခ်က္
ျမန္မာစစ္ေကာင္စီကို ကိုဖိတ္ၾကားမယ္႔ အာဆီယံအစည္းအေ၀း အင္ဒိုနီးရွား လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြ ကန္႔ကြက္
ျမန္မာ နဲ႔ တရုတ္ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ အေျခအေန
RCSS နဲ႔ TNLA တိုက္ပဲြ နမၼတူ ၿမိဳ႕နယ္ ရြာသား၂၀၀၀ ခန္႔ တိမ္းေရွာင္
NUG ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ၿဗိတိန္၀န္ႀကီး ႀကိဳဆို
NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြုရေး မြန်မာတွေလှုပ်ရှား
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိအားတွေတိုးပေးဖို့ Freedom House အဖွဲ့ တိုက်တွန်း
မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးရန် ကုလအထူးသံတမန် အင်ဒိုနီးရှားသို့ သွားမည်
မြစ်ကြီးနား၌ ကျောင်းသား ၁ ဦးကို ဖမ်းမမိသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူအား စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ဖိတ်ကြားမှု အာဆီယံ ပြန်ရုပ်သိမ်းသင့်ကြောင်း HRW တိုက်တွန်း
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ နိုင်ငံတဝန်းဆန္ဒပြမှု
“ကတိခံဝန်ချက်ရေးထိုးစေပြီး နွေးထွေးစွာကြိုဆို”မယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းဖွင့်ရေး အစီအစဉ်
ျမန္မာ့သစ္ေတာနဲ႔ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းေတြကို ကန္အေရးယူဒဏ္ခတ္
ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် စီစဉ်နေ
လူ၂ သိန်းခွဲဝန်းကျင် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်
တစ်ပတ်ကြာသည်အထိ ကိုဝေမိုးနိုင်နှင့် အဆက်အသွယ်မရသေး
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံထိပ်သီး စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲတက်ရောက်မည်
လူ ၅၃ ဦးပါ အင်ဒိုရေတပ် ရေငုတ်သင်္ဘောပျောက်ဆုံး
အျပာေရာင္အက်ႌဝတ္လႈပ္ရွားမႈသတင္းနဲ႔အတူ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးခန္းနဲ႔ တျခားသီတင္းပတ္စဥ္က႑ေတြအပါအဝင္ ဗုဒၶဟူးည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နာရီ ေရဒီယိုအစီအစဥ္
ဦးပဇင်း ဦးရေဝတကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွား
မြင်းခြံမြို့ကျွန်းထဲရွာ တစ်ဒါဇင်ကျော်မှာ စစ်တပ်ကပစ်ခတ်
အပြာရောင် အကျႌဝတ် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ မြန်မာအနှံ ဆန္ဒပြ
တလုပ်မြို့သားတွေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ဧပြီ ၂၀ ရက် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု
စစ်ကောင်စီတပ် လူငယ်တွေကို ပစ်မှတ်ထား ဖမ်းဆီးနေ
မုံရွာအနီးကျေးရွာတွေမှာ လုံခြုံရေးတပ်တွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်လို့ နှစ်ဖက်သေဆုံးမှုရှိ
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ခြွင်းချက်မရှိကန့်ကွက်ဟု NUG အစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြော
အလောဘွမ်‌‌တောင်တိုက်ပွဲတွင် ခလရ ၃၈၇ တပ်ရင်းမှူးအပါအဝင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြားသေဆုံး
ျမန္မာစစ္တပ္ ေလေၾကာင္းထိုးစစ္ေတြ ဟန္႔တားဖို႔ လုံျခံဳေရးေကာင္စီကို သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း တိုက္တြန္း
မြန်မာ့အရေး ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ကြေညာချက်ထုတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက် (အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး)
မိုးမောက်မြို့နယ်၌ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
CDM ဆရာဝန်ကြီးတွေကို ဝရမ်းထုတ်၊ ကုသခွင့်ပေးတဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို လိုင်စင်ပိတ်မယ်လို့ ကြေညာ
ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်သူ နောက်ထပ် အယောက် ၂၀ ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် အမှုဖွင့်
ဖိလစ်မင်းသားကြီး ကွယ်လွန်ကြောင်း ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ကြေညာ
ပဲခူးမြို့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂမှ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန် နိုင်ငံတစ်ချို့မှပြည်သူများပဲခူးနှင့်အတူရပ်တည်ကြောင်းပြသ
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ လိႈင္သာယာမွာ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ ျပန္စ
ပဲခူးနဲ႔ ကေလးၿမိဳ႕က စစ္အာဏာသိမ္း ဆႏၵျပပြဲေတြကို စစ္တပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ပစ္ခတ္မႈ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြနဲ႔ ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္း နံနက္ပိုင္း ၆:၀၀-၇:၀၀ နာရီ
ဆန္ဒပြသူများအား ဖြိုခွင်းရန်လာသည့် ရဲနှင့်စစ်တပ်ယာဉ်တန်းကို KIA က အဝေးထိန်းမိုင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲ
စစ်အာဏာရှင်အောက်က အတာသင်္ကြန် နိုင်ငံအနှံ့ ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ်နေ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ နှိင်ငံ​​တော် ဒုတိယသမ္မတ ကချင်အမျိုးသား ဒူဝါ လရှီးလ
CRPH ေျပာတဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ႏိုင္မလား
ျမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ အျမန္ဆံုး ၾကားဝင္ကူညီဖို႔ ေတာင္းဆို
အိႏၵိယ ကမာၻမွာ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္လာ
ရဲကပစ္လို႔ လူမဲတဦးေသဆံုးရမႈ Minneapolis ၿမိဳ႕မွာ ကာဖ်ဴးထုတ္
ကနီ ေဒသကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ စစ္တပ္ၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႔၊ ၆ ဦးေသဆံုး
ကလေးမြို့တွင် အရေးပေါ် လူနာအတွက် အောက်ဆီဂျင်ဗူးယူပြီးပြန်လာသည့်လူငယ် ပစ်ခတ်ခံရ
မန္တလေးမြို့၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၃ လမ်း၊ ၇၃လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ် ၃၄၊ မြောက်နွားခြံကုန်းတွင် ယနေ့ ဧပြီလ ၁၃ ရက် နံနက် ၃နာရီခွဲကျော်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူနေအိမ်ခြေ ၃၀နီးပါး မီးလောင်
ရေးချောင်းဖျားဒေသ ကေအန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကို စစ်ကောင်စီတပ်များ စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာ
ျမန္မာ့အေရး အဆိုျပဳခ်က္ေတြ အာဆီယံအဖြဲ႕စဥ္းစားေန
ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွာ ပိတ္မိေနသူ ၂၀ ေက်ာ္ ကယ္ဆယ္ေရး တရုတ္ႀကိဳးပမ္းဆဲ
မီးရထား CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခက်အခဲ
သၾကၤန္အက်ေန႔ ဆႏၵျပပြဲ သတင္းမ်ားနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးခန္းနဲ႔ အားကစားက႑အပါအဝင္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နာရီ ဗြီအိုေအ ေရဒီယိုအစီအစဥ္။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန်နဲ့ဆီ စားသောက်ကုန်စျေးတွေ တရိပ်ရိပ် တက်နေတယ်လို့ WFP ပြော
မြန်မာ့အရေး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အလျော်အစားကြီးတဲ့ တွက်ချက်မှု (ဆောင်းပါး)
ကိုဗစ္ တတိယလႈိင္းႀကဳံေနရတဲ့ ဥေရာပ
ဖားကန့်ဒေသ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဟွေလုန်တပ်စခန်းကို KIA သိမ်းပိုက်
မြင်းခြံမှာ နေအိမ် လေးလုံး မီးလောင်ပျက်စီး
အာဆီယံအစည္းအေ၀း အေပၚ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္
စစ္ကိုင္းတိုင္း ကနီၿမိဳ႕ထဲ စစ္တပ္ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အရပ္သားေတြ လက္နက္သံုး တားဆီး
အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က အန်စီအေစာချုပ်တစ်ခုလုံးကို ချိုးဖောက်နေဟု KNLA တပ်မဟာ (၅) ကြေညာ
“တပ်မတော်လို့တောင် ခေါ်ရခက်ပါတယ်။ ဒုစရိုက်ရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ ပိုတူနေတယ်။” – ကုလလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တွန်မ်အန်ဒရူးစ်
အဆိုတော်ဟန်နေတာ အပါအဝင် အယောက် ၂၀ ကို ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်ထပ်မံအမှုဖွင့်
ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၌ စစ်တပ်က ရွာထဲဝင်ရောက် ပစ္စည်းလုယက် ဖျက်ဆီးပြီး ရွာသား ၄၀ ခန့်ကို ဖမ်းဆီး
တနိုင်းမြို့နယ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းငယ် ၂ ခုကို ကေအိုင်အေ သိမ်းပိုက်
ကေလးေတြ ေသဆံုးေစတဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖို႔ ကုလ ထပ္မံ ေတာင္းဆို
ျမန္မာ့အေရး အာဆီယံ ေဆြးေႏြးပဲြ ရလဒ္ကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေမွ်ာ္လင္႔ေစာင့္စား
George Floyd ေသဆံုးမႈအတြက္ ရဲအရာ႐ွိေဟာင္း Derek Chauvin ျပစ္မႈထင္႐ွားေၾကာင္း ဂ်ဴရီအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္
ဧၿပီ ၂၄ က်င္းပမယ္႔ အာဆီယံ စည္းေ၀းပဲြ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္မယ္႔ အလားအလာ
ကိုဗစ္ကာလ ကမၻာ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင္႔ က်ဆင္း
အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးတဲ့ကလေး ၅ဝ ကျော်ကြောင်း UNICEF ပြောဆို
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ EU ပြောကြား
အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲက မြန်မာ့အရေးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား
လက်နက်ကိုင်သူပုန်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအတွင်း ချာ့ဒ်သမ္မတ အစ်ဒရစ်စ် ဒက်ဘီ သေဆုံး
မန္တလေးက ဘာသာပေါင်းစုံ စုပေါင်းအလှူ
တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် ကုန်ကားတွေကို ကိုဗစ်စည်းမျဉ်းတင်းကြပ်
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများ သုံးရက်ဆက်တိုက်ရှိနေ
NUG အစိုးရသစ်ကို မတရားအသင်းလို့ စစ်ကောင်စီ ကြေညာ
မြန်မာ့အရေးကူညီဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း မြန်မာပြည်လာခွင့်မရ
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံကြားဝင်ဖြေရှင်းမှု တရုတ်လိုလား
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကန်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှစ်ဦးဆွေးနွေး
ယင်းမာပင် သီးကုန်းရွာအနီး စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တပ်စွဲပြီး ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေ
ယင်းမာပင်မြို့နယ် သီးကုန်းရွာအနီးပစ်ခတ်မှု ၉ ဦးသေဆုံး
အိန္ဒိယရဲ့ လူဦးရေအများဆုံးပြည်နယ် ကိုဗစ်ဒဏ် အကြီးအကျယ် ခံစားနေရ
မန္တလေး၊ မြရည်နန္ဒာအိမ်ရာအနီးမှာ အမျိုးသားအလောင်းတစ်လောင်း လာပစ်သွား
ရန်ကုန်အဝင်အထွက်နဲ့ အဝေးပြေးလမ်းပေါ် တားဆီးစစ်ဆေးမှုတိုး
ဗဟန်း ဗိုလ်စိန်မှန်မှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက် လူငယ်ရှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ISP Myanmar က ကိုအောင်မျိုးထက် အဖမ်းခံရ
သတင်းမီဒီယာတွေကို စစ်ကောင်စီတားဆီးဖို့ ကြိုးစား
ကနီမြို့နယ်အတွင်း ဒေသခံတွေ ရှောင်ပြေးနေရ
ရန္ကုန္အဝင္အထြက္နဲ႔ အေဝးေျပးလမ္းေပၚ တားဆီးစစ္ေဆးမႈတိုး
ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီကေန႔ လူထုဆႏၵျပပြဲ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္နဲ႔ အဂၤါည ေဆြးေႏြးခန္း အပတ္စဥ္က႑ေတြနဲ႔အတူ ည ၉း၀၀ - ၁၀း၀၀ ေရဒီယိုအစီအစဥ္
RSF အၫႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္က်ဆင္း
အေတီအမ် ကတ် အချို့ တစ်ရက်ကို တစ်သိန်းခွဲသာ ထုတ်နိုင်
The Voice Weekly နဲ့တနင်္သာရီဂျာနယ် အယ်ဒီတာဟောင်းကန့်ဘလူမှာဖမ်းဆီးခံရ
နိုင်ကျဉ်းဟောင်းအဖွဲ့က ကိုတင်မောင်ဦးနဲ့ စုစုပေါင်း ကိုးယောက် ဖမ်းဆီးခံရ
ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် ရန်ကုန်လုံခြုံရေး တင်းကြပ်၊ ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိ
ပဲခူးမြို့ သပိတ်လှုပ်ရှားသူတွေကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေ
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အနည်းဆုံး တစ်ယောက်သေ၊ အယောက် ၉၀ ကျော် အဖမ်းခံရ
ကိုဗစ္ကူးစက္မႈတိုးလာလို႔ အိႏၵိယၿမိဳ႕ႀကီးေတြ ကန္႔သတ္ခ်က္တိုး
ယင်းမာပင် သီးကုန်းရွာအနီး ပစ်ခတ်မှုဒေသခံ ၆ဦးကျဆုံး
ကချင်ပြည် မိုးမောက်မြို့ သျှမ်းလူမျိုး အများစုနေထိုင်သည့် ကျေးရွာအတွင်းကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ မှ တိုက်လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးများကြဲခြင်း၊ လက်နက်ကြီး၊လက်နက်ငယ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်
NUG က ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ဆရာများသမဂ္ဂကဆို
ပဲခူး NLD ပြန်ကြားရေးအဖွဲဝင်တစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရ
သံလွင်မြစ်အတွင်း သွားလာသည့်စက်လှေ ထပ်မံပစ်ခတ်ခံရ
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္း တိုက္ပဲြမ်ား သံုးရက္ဆက္တိုက္ရွိေန
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အရှေ့တောင်အာရှ ပြည်သူများ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွင်ပါဝင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်
NCA ချိုးဖောက်သူမှာ စစ်ကောင်စီများသာဖြစ်ကြောင်း KNU တပ်မဟာ ၅ ပြန်လည်ရှင်းလင်း
ေန႔စဥ္ တီဗြီသတင္းလႊာ (၀၄−၂၀−၂၀၂၁)
ေပါက္ကဲြမႈေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္လံုျခံဳေရး တင္းၾကပ္၊ ဖမ္းဆီးမႈေတြ ရွိ
NUG ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
တ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္ကားေတြကို ကိုဗစ္စည္းမ်ဥ္းတင္းၾကပ္
တာချီလိတ်တွင် ထိုင်းမှပြန်လွှဲပေးသူ ၅ ဦး ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
ဘာကြောင့် စစ်ကောင်စီကို တရုတ်က ရပ်ခံကာကွယ်နေတာလဲ (ဆောင်းပါး)
ဖမ်းဆီးခံရသူများလွတ်မြောက်ရေး အပြာရောင်ဝတ်စုံ Blue Shirt ကမ်းပိန်းပါဝင်ကြရန် နှိုးဆော်
ဂျပန်သတင်းထောက်ကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဂျပန်အစိုးရတောင်းဆို
“လိုလျှင်ယူ ၊ ပိုလျှင်လှူ” ပြည်သူ့လှည်းမှ ပြည်သူ့ကားဖြင့် ပြောင်းလဲ လှူဒါန်း
မိုးကုတ်မြို့၌ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၁ ဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက ဖမ်းဆီး
ရွှေဘိုမြို့၌ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ၁ ဦးကို စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးသွား
ယင်းမာပင်မြို့နယ်ကျေးရွာများတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘေးရန်ကြောင့် ဒေသခံများ နေရပ်စွန့်ခွာ
တအာင်းပလောင် စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့် လီဆူသူဌေးတို့ ပြန်လွတ်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ခမရ ၃၈၉ တပ်စခန်းကို ကေအိုင်အေသိမ်းပိုက်
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကန္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးေဆြးေႏြး
နိုင်ငံကာကွယ်တဲ့ သံတမန်များနဲ့ ဆန္ဒပြခံရတဲ့သံရုံးများ
ပဲခူးၿမိဳ႕ သပိတ္လႈပ္ရွားသူေတြကို ရွာေဖြဖမ္းဆီးေန
EU လူသားစာနာမႈအကူအညီ ျမန္မာလူထုအတြက္ ထပ္တိုးေပးမည္
ဖမ္းထားတဲ့ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ျပန္လႊတ္ဖို႔ ဂ်ပန္သတင္းသမားေတြ လႈပ္ရွားေတာင္းဆို
ကလေးမြို့မှာ စစ်တပ်နဲ့ရဲက တင်းကျပ်စစ်ဆေး
မြင်းခြံမှာ အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ မြို့တွင်းတိုက်ပွဲ ၂ ရက်တာ
အာဆီယံ ေဆြးေႏြးပဲြအေပၚ CRPH အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင္႔ (ဦးထင္လင္းေအာင္)
ျမန္မာ့ျပႆနာေျပလည္ေရးႏွင္႔ အာဆီယံအခန္းက႑ ကုလေခါင္းေဆာင္ေတြ ေထာက္ျပ
ဥတုရာသီ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဦးစားေပးမူ၀ါဒ အျဖစ္ ကန္ ထပ္မံအတည္ျပဳ
မိုးညှင်းတွင် ကုန်တင်ယာဉ် ၄ စီး ပစ်ခတ်ခံရ၊ ယာဉ်မောင်း ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦး စိုးရိမ်ဒဏ်ရာရရှိ
ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော် J Fire အပါအဝင် အယောက် ၂၀ ကို ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်ထပ်မံအမှုဖွင့်
ဂျပန်သတင်းထောက် ယူကီခိတဇုမိ ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးထားကြောင်း စစ်တပ်မီဒီယာကြေညာ
အာဆီယံအစည်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင် အွန်လိုင်းကသာတက်မည်၊ အာဆီယံကို ၈၈မျိုးဆက် သတိပေး
© 2014 Shafaqna.com All Rights Reserved. Myanmar News strongly believes in 'circulation of information' for public interest and we would therefore carefully use your material inanon-commercial way. Myanmar News is justaNews Reader using automatic input devices. Thus, the main publishers and sources are clearly responsible for their content.